Nushell chitsva chemuchinjikwa-chikuva kuraira Shell | Linux Vakapindwa muropa
Nushell chitsva chemuchinjikwa-chikuva kuraira ganda
Munguva pfupi yapfuura vhezheni yekutanga yeiyo nushell command shell yakaburitswa, Inobatanidza kugona kwePower Shell uye yakasarudzika Unix shell.
Nushell anoshandisa yakajairwa pombi sisitimu yevanoshandisa Unix mune fomati «raira | mafirita | goho rinodzora ». Nokusingaperi, zvinobuda zvinomisikidzwa ne otomatiki maonero kuraira, iyo inoshandisa tafura fomati, asi zvakare zvinokwanisika kushandisa mirairo kuratidza dhijitari data uye ruzivo mukutarisa kwemuti
1 Nezve Nushell
2 Maitiro ekuisa nushell paLinux?
Iko kusimba kweiyo nushell iko kugona kushandisa yakarongeka dataseti yakazara yemirairo yekusefa data rakarongeka unopihwa kwauri Vanokutendera kusefa mitsara, kurongedza nemakoramu, kupfupisa data, ita zvakapusa kuverenga, shandisa kukosha macounters, uye shandura zvinoburitswa kuita CSV, JSON, TOML, uye mafomati eYAML.
Ye data isina kurongeka (zvinyorwa), izvo ipa rairo yekukamura mumakoramu uye mitsara zvichibva pamatanho ekumisikidza. iwe unofemerwa nemapurojekiti akaita sePowerShell, anoshanda epurogiramu mitauro, uye echizvino zvino maturusi.
Iko shell inobvumira kuronga kuburitswa kwemirairo dzakasiyana uye zvirimo mumafaira uye shandisa mafirita asingabvumirwe, ayo anoburitswa achishandisa syntax yakabatana isingade kudzidza sarudzo yemutsetse wekuraira kune wega mutemo wakatarwa.
Somuenzaniso, nushell inobvumidza kushandisa kuvaka senge «ls | kupi saizi> 10kb "uye" ps | uko cpu> 10«, Izvo zvinongogadzira mafaera akakura kupfuura 10Kb nemaitiro aishandisa anopfuura masekondi gumi eCPU zviwanikwa.
Panzvimbo pekushandisa mafaera uye masevhisi seyakasvibirira mavara hova, nushell inobata yega yega yekuisa seyakagadziriswa. Semuenzaniso, iwe paunoverenga zvirimo mune dhairekitori, chaunowana irondedzero yezvinhu, apo chinhu chimwe nechimwe chinomiririra chinhu mune dhairekitori. Aya maitiro anogona kupayirwa kuburikidza nhevedzano yematanho, mune akateedzana emirairo inonzi 'pombi'.
Nushell anoshandisa akasiyana plugins kuronga iyo data, iyo inoratidza kuburitswa kwemirairo chaiyo nemhando dzemafaira. Saizvozvowo plugins zvinokurudzirwa kumirairo cd, ls, ps, cp, mkdir, mv, date, rm (chirevo chekutanga "^" chinogona kushandiswa kudaidza mirairo yemuno, semuenzaniso, kudaidza "^ ls" kunotanga iko kushandiswa ls system ).
Kune zvakare zvakare akasarudzika mirairo, senge "yakavhurika", kuratidza ruzivo nezve iyo yakasarudzwa faira setafura. Kune mafomati eJSON, TOML, uye YAML, otomatiki kurongedza kunotsigirwa
Iyo kodhi yakanyorwa muRust uye inoparadzirwa pasi peMIT rezinesi. Iyo purojekiti yakatanga kugadzirwa seyambuka-chikuva uye inotsigira basa paWindows, macOS uye Linux. Kuti uwedzere mashandiro, mapulagini anogona kushandiswa, kudyidzana kunoitwa zvinoenderana neiyo JSON-RPC protocol.
Maitiro ekuisa nushell paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa nushell pane yavo Linux kugovera, Vanogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana pazasi.
Kune avo vari Arch Linux, Manjaro, Arco Linux vashandisi kana chero kumwe kugoverwa kweArch Linux kunogona kuisa nushell kubva kuAUR repositories.
Ivo vanofanirwa kungova neAUR wizard yakaiswa uye iyo repository inogoneswa. Kana iwe usina, unogona kushanyira chinyorwa chinotevera kupi tinokurudzira vamwe vabatsiri.
Mune terminal ivo vanongofanira kunyora iwo unotevera kuraira:
yay -S nushell
Iye zvino kune mamwe ese ekuparadzirwa kweLinux iwe unofanirwa kuisa nerubatsiro rweRust package maneja. Kana iwe usinayo mune chinongedzo unofanirwa kunyora zvinotevera.
Nhevedzano yesarudzo ichavhura kwatiri mune yedu terminal uye isu tinofanirwa kupindura nenzira kwayo. Iwe unofanirwa kudzvanya 1 kuti uenderere mberi nekumisikidza nemitengo yakasarudzika, iyo inokurudzirwa kune vakawanda.
Kana tangopedza tinogona kumisikidza yedu yazvino Shell kuti itange kushanda:
Kuisa nushell kuburikidza nhumbi, ingo nyora unotevera kuraira mune iyo terminal:
Uye ndizvozvo, unogona kushandisa iyi Shell pane yako system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Nushell chitsva chemuchinjikwa-chikuva kuraira ganda
Jorge lopez akadaro
Uye ndeupi murairo wekuisa nushell nemutero?
Pindura Jorge Lopez
NVIDIA inogadziridza mutyairi wayo weLinux nekuvandudza kwakawanda uye kugadzirisa
VMware yakatenga makambani maviri ekuchengetedza makore